Scotland waxay qaban doontaa afti labaad oo ku saabsan madaxbanaanida UK 2023 -ka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Scotland Breaking News » Scotland waxay qaban doontaa afti labaad oo ku saabsan madaxbanaanida UK 2023 -ka
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Dowladda • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Scotland Breaking News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Shirweynaha Xisbiga Qaranka ee Scottish-ka ayaa taageeray qorshayaasha dawladda Scottish-ka ee ku aaddan waqtiga aftida madax-bannaanida kale ee “ugu horraysa” daqiiqadda suurtagalka ah ka dib qalalaasaha COVID-19.
Wasiirka Koowaad ee Scotland wuxuu doonayaa afti madaxbannaan oo labaad.
Aftida labaad ee madaxbanaanida Scotland oo la qaban doono dhamaadka 2023.
Aftida ayaa la qabanayaa marka ugu horreysa ee suurtogalka ah kadib xiisadda COVID-19.
Khudbad ay maanta ka jeedisay shirweynihii dayrta ee xisbiga Scottish National Party (SNP), ayaa Wasiirka Koowaad ee Scotland Nicola Sturgeon waxay kaga dhawaaqday in xisbigeedu damacsan yahay inuu qabto afti kale oo sharci oo ku saabsan madaxbanaanida Boqortooyada Ingiriiska.
Wasiirka Koowaad ee Scotland Nicola Sturgeon ayaa ku dhawaaqday in xisbigeeda uu damacsan yahay inuu qabto afti sharci oo kale oo ku saabsan madaxbanaanida Boqortooyada Ingiriiska
Sturgeon wuxuu yiri kii labaad Aftida madaxbanaanida Scotland waxaa la qaban doonaa dhammaadka 2023 haddii masiibada COVID-19 la xakameeyo, waxayna weydiisatay dowladda Ingiriiska inay oggolaato "iyadoo la kaashanayo iskaashiga".
Sida laga soo xigtay Sturgeon, dadka ku nool Scotland waxay doorteen baarlamaan cusub oo Scottish ah bishii May, kaas oo leh “aqlabiyad cad oo mug leh oo u janjeedha aftida madaxbannaanida”.
“Markaan ka soo baxno masiibada, go'aanno ayaa la gaarayaa kuwaas oo qaabayn doona Scotland tobanaan sano ee soo socda. Marka waa inaan go'aansanaa. Yaa laga yaabaa inuu qaato go'aamadaas: dadka halkan jooga Scotland ama dawladaha aanan u codayn Westminster. Taasi waa doorashada aan damacsannahay inaan u fidinno dadka reer Scotland afti sharci ah muddadan Baarlamaanka - oggolaanshaha COVID, dhammaadka 2023, ”ayay ku tiri khudbadda.
Sturgeon wuxuu intaas ku daray "kuma xirna dowladda Westminster oo lix xildhibaan ku leh Scotland inay go'aan ka gaarto mustaqbalkeena iyadoon oggolaansho laga haysan dadka halkan ku nool."
Sturgeon waxay sheegtay inaysan "dejin doonin heerka saxda ah ee caabuqa" marka cod -bixinta dhici karto - "laakiin waxaad jeclaan lahayd inaad aragto xaaladda COVID oo gacanta lagu hayo".
The Xisbiga Qaranka Scottish-ka shirku wuxuu taageeray qorshayaasha dawladda Scottish-ka ee ku aaddan waqtiga aftida madax-bannaanida kale ee “ugu horraysa” daqiiqadda suurtagalka ah ka dib qalalaasaha COVID-19.
Xisbigu wuxuu yiri taariikhda waa in lagu go'aamiyaa “halbeegyo xog-ku-saleysan” oo ku saabsan marka ay dhammaato xiisadda caafimaadka dadweynaha.
Aftida madaxbannaanida Scotland ayaa la qabtay 2014, markii 55 boqolkiiba codbixiyeyaashu ay taageereen inay sii joogaan Britain. Waxyar kadib markii xisbiga Sturgeon uu xaqiijiyey guushii afaraad oo xiriir ah doorashadii baarlamaanka Scottish -ka bishii May, waxay ballanqaaday inay ku riixeyso aftida madaxbannaanida labaad markii dhibaatada masiibada ay dhammaato.
Raiisel wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa horey u sheegay inuusan ansixin doonin aftida madaxbanaanida labaad.